Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Miasa maimaimpoana ireo mpiasa Alitalia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Alitalia Tsy mandoa mpiasa
Ny alitalia dia tsy mandoa ny karamany. Lazao ireo kaomisera: “Haloanay ny volan'ny marika.” Hatramin'izao dia ny antsasaky ny karama amin'ny volana septambra ihany no efa naloan'ny orinasa. Ny fifandanjana dia homena raha tsy aorian'ireo “komisiona momba ny valin'ny fanambarana famantarana” ireo komisiona.
Mety haharitra herinandro maromaro ny tolotra, satria ny tolotra voalohany tokony hamatorana dia tsy maintsy apetraka amin'ny 4 Oktobra amin'ny 2 ora tolak'andro, amin'ny vidiny ambany indrindra 290 tapitrisa Euros (miampy VAT).
Saingy tsy misy mpitatitra toa liana amin'ny fividianana marika amin'ity dingana ity.
"Tsy azo tanterahina ny fanombanana", hoy i Alfredo Altavilla, filohan'ny ITA, ilay zotram-piaramanidina vaovao, izay angamba ilay orinasa liana indrindra amin'ny marika amin'ilay orinasa taloha.
Vidiny ifotony 290 tapitrisa
Mba hanaovana tolotra amin'ity dingana ity dia mitaky fandoavana 40 tapitrisa euro izany. Ireo olona manana fahazoan-dàlana amin'ny fitaterana an-habakabaka na AOC (Air Operator Certificate) ary harato 200 tapitrisa farafahakeliny no afaka miditra amin'ny fatorana.
Raha tsy misy ny tolotra mitovy farafaharatsiny amin'ny vidiny ifotony, dia hanokatra ny tolotra fihodinana faharoa ny kaomisera.
Ny antso ho an'ny tendrena, antsoina hoe "fanasana," dia manome dingana faharoa raha tsy misy tolotra mety amin'ny dingana voalohany. Amin'ity tranga ity, ny komisiona dia "hanatanteraka ny dingana faharoa amin'ny loka miaraka amin'ny fangatahana ireo olom-pehezina rehetra hanolotra tolotra mifatotra ho fihenan'ny vidiny natolotra."
Tsy voalaza ny vidin'ny fototra amin'ny fihodinana faharoa. Ny marika dia manana sanda boky 150 tapitrisa amin'ny fanambarana ara-bola an'i Alitalia. Noho izany dia inoana fa tsy hianjera ambanin'io isa io izy io.
Fihodinana fahatelo: Safidin'ny komisiona tsy misafidy
Raha amin'ny voalohany toy ny amin'ny dingana faharoa dia misy tolotra betsaka kokoa dia hidina amin'ny fiakarana izany, manomboka amin'ny tolotra tsara indrindra, amin'ny vola "tsy latsaky ny 10 tapitrisa euro." Raha tsy mahafa-po ihany koa ny fihodinana faharoa dia hovaina ny fomba fiasa. "Avy eo ireo komisiona tsy manam-paharoa dia hiroso amin'ny fivarotana ny marika nefa tsy misy teritery amin'ny fomba fitantanana ny mpandraharaha ara-toekarena hitan'izy ireo," hoy ny fanambarana.
Ho an'ny fihodinana fahatelo, noho izany, hisy ny fahaiza-manaon'ny kaomisera. Amin'ity dingana ity, ITA afaka miditra, izay mikendry ny hividy ny marika fa tsy torana.
"Ny marika dia ho azon'ny mpanolo-tsaina mahomby amin'ny 31 Desambra 2021", hoy ny fanasana navoakan'ny kaomisera.
Ho an'ireo mpiasa 10,500 XNUMX an'ny Alitalia, misy, noho izany, ny fiandrasana lava hahalalana ny fifandanjan-karaman'izy ireo amin'ny volana septambra. Ary tsy azo antoka fa amin'ny farany dia misy ny vola. Tamin'ny fifandraisana anatiny dia nanoratra tamin'ny mpiasa ireo kaomisera Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande, ary Daniele Santosuosso:
"Araka ny fantatrao, ny asantsika tafiditra ao amin'ny sampana fiaramanidina dia antenaina hifarana amin'ny 14 Oktobra, ary noho izany dia voatery hitantana tsy tapaka ny volan'ny orinasa amin'ity tanjona ity izahay, amin'ny fiheverana fa ny fanidiana ny varotra tamin'ny 24 Aogositra dia niteraka fijanonana be amin'ny fidiram-bola.
"Miala tsiny indrindra izahay nampahafantatra anao fa ny karaman'ny volana ankehitriny dia ahitsy amin'ny 50% miaraka amin'ny sandany amin'ny Alatsinainy 27 septambra, raha 50% ambiny kosa no hatolotra anao raha vantany vao misy porofonay momba ny vokany momba ny fanambaràna marika, araka ny takian'ny Vaomiera Eoropeana. ”
Raha ny marina, ny lalàna dia manome fa ny vola azo avy amin'ny fivarotana fananana dia atao laharam-pahamehana hanohanana ny vidiny ankehitriny, indrindra ny karama.
Ny minisitry ny Fizahantany Jamaika dia nalahelo mafy momba an'i Trelawny...
Hawaii dia nanambara torolàlana vaovao ho an'ny iraisam-pirenena...